Feature July 19, 2019
ဝေယံဘုန်း ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့သည် အာဇာနည်နေ့ဖြစ်သည်။ အာဇာနည်နေ့ကို ရောက်တိုင်း ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား ပြည်သူအပေါင်းက သတိတရ ရှိကြ လေသည်။ လွန်ခဲ့သော ၇၂ နှစ်၊ ဤနေ့ ဤရက်က ဆိုလျှင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝန်းလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်း မကျန်သော ပြည်သူအပေါင်း...
Feature July 8, 2019
မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ပျားတောင်ဒေသခံတို့မှာ သူတို့မလိုလားခဲ့၊ ကန့်ကွက်ခဲ့သည့် ကျောက်မီးသွေးဆိုသည်ကို ထပ်မံ ကြားသိလိုက်ရသည်။ တစ်ကျော့ပြန် ထပ်တိုးစိုးရိမ်ကြောင့်ကြမိကြောင်းလည်း သူတို့က ပြော၏။ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ တစ်ရုံကိုကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြင့်လည်ပတ်မည်ဆိုခြင်းကြောင့်ပင်။ “ ရှေ့က ကန့်ကွက်ခဲ့တာတောင် မပြီးသေးဘူး၊ နောက်ထပ်တစ်ခု ထပ်တိုးလာပြန်ဦးမယ်”ဟု ဒေသခံ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးက မှတ်ချက်ပြု၏။ သူပြောလိုက်သည့် ‘ရှေ့က ကန့်ကွက်ခဲ့တာ’ဆိုသည်မှာ...
Feature June 30, 2019
ဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော ယနေ့ခေတ်တွင် သိသိသာသာ များပြားလာသည်မှာ သံချပ်၊ သရော်စာများ ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူတို့ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး တင်ဆက်နေကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာမ မသီတာ (စမ်းချောင်း) က အဆိုပါ အနုပညာထုတ်ကုန်တို့တွင် အပြုသဘော ရည်ရွယ်ချက်များကို တွေ့နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ "သံချပ်ဖြစ်ဖြစ်၊...
1234...1919 ၏စာမျက်နှာ 3